UkuPhuhliswa kweeMbali ze-Umbrellas zangaphandle, iindlela
INtengiso ye-Umbrellas yangaphandle ifundwe ngokubanzi ngababhali bengxelo kugxilwe kakhulu kubathengisi bendawo, ulwandiso lwengingqi, amacandelo akhokelayo, iindlela ezikhulayo kunye namathuba aphambili, kunye nezinye izifundo ezibalulekileyo. Ingxelo iveza izinto ezinamandla ezenza ukuba ibango lingaphandle ...
Ndaye ndafaka i-ambrela ene-anchor eyakhelweyo.
Ngokubanzi, usuku elunxwemeni lolusuku kufanele lube lusuku lokuphumla kunye nolonwabo elangeni, ingeyiyo imini yoxinzelelo kuba iambrela ihlala ibhabha ibaleka. Ngethamsanqa, ii-anchor ezilungileyo kakhulu zilula ukufaka kwaye ziye zavavanywa ngabathengi amaxesha ngamaxesha ukuba bahlale kwindawo kwanaxa ...
Kuyanetha, kunetha iikati kunye nezinja, umoya ovuthuzayo uvuthuze isambulela sakho ngaphakathi, kwaye ngoku unxilile. Nokuba yimvula ebandayo yasebusika okanye imvula efudumeleyo yehlobo, uya kufuna iambrela onokuxhomekeka kuyo ukugcina umzimba wakho womile. Ukuba ufana r ...
ngu admin nge-20-03-05
sasiye kwindibano yezorhwebo eMzantsi Afrika ngoSeptemba ka-2019, sibonisa imveliso yethu apho, iimpahla zethu zamkelwa ngabantu bendawo.
Abathengi bamazwe aphesheya eSpain batyelele inkampani yethu ingxubusho yeshishini ngo-Disemba ka-2019, siqinisekile ukuba inkampani yethu iza kubasebenzela ngcono ngonyaka ka-2020.